Virtual airlines: Masìna ianao, manampy!
Important Virtual airlines: Masìna ianao, manampy!
1 taona 11 volana lasa izay #249 by JanneAir15
Salama! Aho liana momba ireo airlines virtoaly. Efa mahalala zavatra momba azy ireo toy izany eto no mbola te-hahafantatra. Dia tiako ho fantatra inona no fandaharana tsy maintsy manana, ary avy eo raha manao mahafantatra zavatra manan-danja hafa ny zavatra tokony ho fantatro aho, dia lazao amiko. Saingy heveriko fa ny rehetra. Oh! ary raha manana tolo-kevitra virtoaly fiaramanidina ry zareo tonga soa!
1 taona 11 volana lasa izay #250 by Dariussssss
Voalohany indrindra, Miarahaba sy Tonga soa eto amin'ny Forum.
Fa am-piandohana, dia mila ny fiaramanidina simulator. Misy vitsivitsy amin'izy ireo, ary ny safidy dia miankina amin'ny PC anananao, marina kokoa Microsoft Flight Simulators 2004 sy FSX, X-Plane sy P3D. Izy ireo payware rehetra, ka tsy maintsy hieritreritra izay anjara koa. Misy fiaramanidina iray freeware SIM, fa izany no zava-dehibe ratsy, noho izany dia fanaony mihitsy aza misahirana manazava momba izany.
Ary arakaraka ny fiaramanidina, ianao no mila fiaramanidina ny sasany. Farany, dia ny ACARS mpanjifa. Izany iray avy amin'ny iray ihany koa ny miovaova VA hafa. Ny sasany manana ny azy avy, fomba amam-panao mpanjifa. Ireo izay tsy, ny ankamaroany mampiasa ny sasany antitra be sady ratsy tsy azo antoka mpanjifa
Hafa noho izany, mety mila no add-ons mba hanatsarana ny lafiny sasany amin'ny fiaramanidina SIM, fa tahaka hoy izaho: izay no mety fotsiny.
1 taona 11 volana lasa izay #251 by Gh0stRider203
Izaho manokana dia soso-kevitra FSX, na dia amin'izao fotoana .... ianao tsy maintsy haka azy amin'ny alalan'ny Steam toy ny tsara indrindra ny fahalalako MS tsy manohana ny kapila Version intsony. Aho ho tapa-doha iany .... ny vidiny ho an'ny Steam Edition dia mitapy izany mangalatra! I nandoa $ 60 for FSX: Gold Edition (Deluxe + haingana Add-on), ary ianao tsy mandoa lavitra izany ya. ONE lafy ratsiny izany dia tsy REHETRA payware no hiasanao, fa ny fahalalako izany lisitra fohy.
Aho raha ny marina ny tompony / Tale Jeneralin'ny VA American Airways sy tonga soa fa aoka ianareo mba hividy izay payware fiaramanidina tianao, tsy mitaky anao mba hividy fiaramanidina mba ho anisan'ny mandrafitra ny VA. RAHA rehetra anananao / tianao dia freeware, mangatsiaka aho amin'izany. Hitako izany fomba fiainana ... dia afaka ny ho tanteraka B * TCH indraindray, ka nahoana no manao azy mihoatra ny iray? tpt
Somary aho nametra-miverina lehilahy. Miezaka ny tsara indrindra mba hiasa amin'ny ny mpitondra sambonao, ary hataoko hanatitra sasany valisoa ho an'ireo izay mazoto (miainga amin'ny "vola" tombontsoa ho manana ny fiaramanidina fotsiny voatendry ho azy ireo). Raha ny marina izahay mifototra amin'ny mg anglisy (toy ny ao amin'ny faritra LOL) toerana, ary mampiasa ny fiaramanidina ampy rindrambaiko (izay tena mora ampiasaina btw). Plus, dia afaka manome anao ny freeware rehetra fiaramanidina ampiasaintsika (na ny sasany dia amin'ny eto LOL)
Raha ataoko ela indrindra-ny fipetrany entana, satria izany no mahatonga ny VA indrindra $, dia aoka ny mpitondra sambonao dia hanapa-kevitra izay tiany hatao.
Fotoana mamorona pejy: 0.582 segondra